यी ४ राशिका युवतीमा हुन्छ यस्तो आकर्षण शक्ति, जस्ले जस्तोसुकै पुरुषलाई पारिदिन्छन् मोहित - Araniko Times
एजेन्सी । हरेक मानिसमा आ–आफ्नै किसिमको शौन्दर्यता एवं अरुलाई आकर्षण गर्ने गुण हुन्छ । त्यसमा पनि युवतिको सुन्दरताका विषयमा सधैँ चर्चा हुने गर्छ । तर केही यस्ता पनि युवति हुन्छन्, जो आफ्नो सुन्दरता बिना नै अरुलाई आफुतिर आकर्षण गर्न सकछन् । यिनीहरु स्वयमले भन्दा पनि यिनीहरुको राशीले गर्दा यिनहिरुतिर जस्तो सुकै पुरुष पनि आर्कषित हुने गर्दछन् ।
शास्त्रअनुसार १२ राशिमध्ये चार राशि भएका महिलाहरुमा जस्तोसुकै पुरुषलाई आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ । कुन–कुन राशि भएका महिलामा यस्तो गुण हुन्छ त ?
शुरुमा छ मिथुन राशिः मिथुन राशि भएका महिलाहरुको तुलना अप्सरासँग गरिन्छ । जसले जस्तोसुकै पुरुषलाई पनि आकर्षित गर्न सक्छन् । सुन्दरताबाहेक यी राशि भएका युवतीमा यस्ता थुप्रै गुण हुन्छ जसले पुरुषलाई आकर्षित गर्छन् । उनीहसँग धेरै उमेरसम्म जवान देखिने क्षमता पनि हुन्छ ।
त्यसपछि वृष राशिः वृष राशि भएका युवतीहरुको गन्ती सुन्दर देवीसँग हुन्छ । उनीहरुसँग अरु व्यक्तिमाथि आफ्नो अधिकार जमाउने गुण हुन्छ । साथै उनीहरुले भनेका कुरा पुरुषहरु निकै सजिलै मान्ने र पूरा गर्ने गर्दछन् ।
त्यसैगरी वृश्चिक राशिः वृश्चिक राशि भएका युवतीहरुसँग कसैलाई पनि आकर्षित गर्ने शक्ति हुन्छ । उनीहरुको अनुहार र आँखामा एक प्रकारको सम्मोहन हुन्छ । त्यसकारण जसले पनि उनीहरुलाई हेर्छन् उनीहरु मोहित हुन्छन् ।
र अन्त्यमा मीन राशिः मीन राशि भएका युवतीहरु रोमान्टिक हुन्छन् । पुरुषहरु उनीहरुको प्रेममा निकै सजिलै पर्ने गर्दछन् । उनीहरु आफ्नो मिठो कुराले चाँडै नै पुरुषलाई आकर्षित गरिहाल्छन् ।
यी राशि भएका महिलाहरुले पुरुषलाई आफ्नो बसमा पार्न सक्छन् । चाहे ती महिलाहरु गलत नै किन नहोऊन् उनीहरुलाई पुरुषहरुले कहिल्यै पनि गलत भन्नै सक्दैनन् । त्यसो भएको हुनाले पनि यि राशी भएका महिलाहरुले पुरुषहरुलाई आफ्नो बसमा राख्दै जे पनि गर्न र गराउन सक्षम हुन्छन् । यस्ता राशी भएका महिलाहरुका बारेमा हरेक पुरुषले जानकारी राख्न आवश्यक हुन्छ ।
फेरि घट्यो सुनको मूल्य, कति छ आज ? हेर्नुहोस
काठमाडौं : नेपाली बजारमा शुक्रवार सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिन छापावाल सुनको मूल्यमा प्रति तोला ६ सय रुपैयाँको गिरावट आएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघका अनुसार, शुक्रवार छापावाल सुन प्रति तोला ८६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो दिन यस्तो सुन प्रति तोला ८६ हजार […]
अमेरिकावाट आएर विवाह गरे, सुहागरातकै दिन वुहारीमा यस्तो खोट देखेपछि हराए जवान छोरा (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । दुई आमाका दुई भाई छोरा थिए । यो घटना चितवनको हो । चितवनका दुई आमाहरु आफ्ना जवान छोराहरु हराएको भन्दै मिडियामा आए । उनीहरुले आफ्ना समस्या मिडिया सामु राखेका छन् । चितवन मंगलपुरकी एक आमा आफ्ना १७ वर्षका छोरा हराएको भन्दै खोजीका लागि सहयोग माग्न पुगेकी थिइन् भने अर्की नारायणगढकी आमा पनि आफ्नो […]
जनकपुरधाम – प्रदेश नं २ सरकारले मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान् रामको जन्मोत्सवका अवसरमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदेशवासीलाई रामनवमीको शुभकामना साथ भोलि सार्वजनिक बिदा दिइएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर सरकारी निर्देशनको पालनतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ । एकै विद्यालयका ३ दर्जन भन्दा बढीमा कोरोना […]
हजुरबुबा मरेको ९ दिनमा नाति र हजुरआमाको हुन्छ विवाह, यस्तोपनि परम्परा रहेछ